1. Yintoni inkqubo yoku-odola?
2. Ndingasilandela njani isimo seodolo yam?
3. Zeziphi iindlela endinokuzihlawula uku-odola?
4. Yintoni iFloristum.ru?
5. Kutheni ndingakwazi ukuhlawula ngekhadi?
6. Ungaqinisekisa ukuba intlawulo yekhadi ikhuselekile?
7. Ndingakwazi ukuhlawula ngekheshi?
8. isebenza njani imali?
9. Ngaba kukho naziphi na iziqinisekiso zokuba imali ehlawuliweyo iza kufika kuwe?
10. Zeziphi iindlela ezinokusetyenziselwa ukuhlawula iodolo?
11. Ngaba ukuhanjiswa okukhawulezayo kunokwenzeka?
12. Zithini iindleko zokuhambisa?
13. Ngaba ukuhanjiswa kunokwenziwa kanye ngexesha?
14. Ndingafaka iodolo ukuba andazi idilesi yomamkeli?
15. Ndiya kwaziswa njani ngohambiso?
16. Ndingawenza iodolo yokusiwa kwelinye ilizwe?
17. Uya kuhanjiswa nini lo myalelo?
Imibuzo malunga nomyalelo
18. Ungawenza njani umyalelo?
19. Kufuneka wenze ntoni xa ungasithandi isipha?
20. Andikwazi kunxibelelana neentyatyambo ngefowuni. Kwenziwe ntoni?
21. Ukuba ixesha lokuhambisa lifanele kuvunyelwane ngalo nomamkeli, baya kubiza nini?
22. Ndidinga ukubeka iodolo kwangaphambili?
23. Yenziwa njani i-odolo yequmrhu?
24. Isivumelwano samashishini asemthethweni
25. lwenziwa njani ubhaliso?
26. Leliphi elona nani lincinci lemibala elifunekayo uku-odola?
Imibuzo malunga ne-bouquet
27. Ngaba kunokwenzeka ukutshintsha izinto zesipha okanye umbala wombala wazo?
28. Ungafumana phi ukwenziwa kwesipha?
29. Ndingabufumana njani ubungakanani besipha?
30. Ndingafumana ntoni kwicandelo le-Super Offer?
31. Ungathini xa ufuna isipha seentyatyambo ezithile?
32. Ngaba isipha siza kufana nomfanekiso okwisiza?
33. Ngaba isipha sinokuphuculwa?
34. Ngaba kunokwenzeka ukuthenga iintyatyambo ngeembiza okanye izithole?
35. Ndingayifaka phi iminqweno yam ye-odolo?
36. Ngaba iintyatyambo ziya kuba ntsha?
Isiqinisekiso somgangatho weenkonzo Floristum.ru
37. Ngaba intlawulo ngewebhusayithi ikhuselekile?
38. Andinakukhathazeka ngokhuseleko lwemali yam?
39. Ndingayifumana njani imali ebuyisiweyo?
40. Ndingasibhala phi isikhalazo sam?
41. Ndingabhala njani uphononongo?
42. Ngaba zonke iingxelo ziyinyani?
43. Ndingasithumela isipha esinekhadi leposi?
44. Ngaba ndingayalela enye into ngaphandle kwesipha?
45. Leliphi ikhadi eliza kuthunyelwa kunye nesipha?
46. ​​Ndingayibona ifoto yomamkeli ephethe isipha?
47. Unayo i-app ye-smartphone?
48. Kutheni kukhethwe i-bouquets ezixekweni?
49. Kutheni amaxabiso engingqi ephezulu kuneMoscow?
Kuqala, ubonakalisa isixeko sonikezelo, khetha i-bouquet oyithandayo ngokunqakraza kwiqhosha kuyo kwaye uye kwiphepha lokuphuma. Apha ucacisa idatha yomamkeli, ixesha lokuhambisa kunye nedatha yomthumeli wesipha. Emva kokuhlawula ngempumelelo, iodolo iya kwiiflorists. Uya kwaziswa malunga nokuhanjiswa ngomyalezo othunyelwe kwinombolo yakho yefowuni kunye ne-imeyile, kwaye ulwazi luyafumaneka kwiakhawunti yakho ku.floristum.ru/en.
Sithumela ulwazi lwamva nje malunga nenqanaba le-odolo yakho ngemiyalezo yeSMS, ii-imeyile, unokujonga imeko yeodolo kwiakhawunti yakho kwiwebhusayithi yethu. Uya kufumana i-SMS kunye nomyalezo we-imeyile malunga nokufunyanwa kwentlawulo ye-odolo kunye nabafowunelwa beentyatyambo eziqokelela isipha sakho.
Ungahlawula ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi usebenzisa ikhadi lebhanki lomntu ngamnye. Kwizinto ezisemthethweni, ukuhlawulwa ngokudluliselwa kwebhanki kuyafumaneka.
I-Floristum.ru yinkonzo efanelekileyo apho iivenkile zeentyatyambo kunye neentyatyambo ezizodwa ezivela kwihlabathi liphela zibeka imveliso yazo. Apha ungakhetha kwaye u-odole isipha seentyatyambo esixekweni sakho, esiza kuyanelisa ngokupheleleyo iminqweno yakho. Ukongeza, abathengi bokwenene bathumela uphononongo kule ndawo, ekulungeleyo xa ukhetha indawo yokufaka iodolo yokuhanjiswa kweentyatyambo. I-Floristum.ru ikuqinisekisa ukwenziwa kwe-odolo, kwiimeko ezingalindelekanga inkonzo iyakubuyisela imali yakho kuwe, oku kunokwenzeka ngenxa yokuba abatyali beentengiso kunye nevenkile befumana imali yokuhanjiswa kweentyatyambo kwiintsuku ezintathu kuphela emva kokugqitywa komyalelo, ngeli xesha umthengi angafaka isikhalazo kwaye afumane imali umva.
Qiniseka ukuba iinkcukacha zebhanki yakho zifakwe ngokuchanekileyo, igama kunye nefani zibhalwe ngesiNgesi kanye njengakwikhadi. Ikhowudi ye-CVV ngamanani ama-3 abekwe ngasemva ekhadini. Kwiimeko ezininzi, inkqubo iya kukucacisela ukuba kutheni intlawulo ingagqitywanga ngempumelelo. Ukuba intlawulo iyaliwe yibhanki yakho, qiniseka ukunxibelelana nenkonzo yenkxaso usebenzisa inombolo yasimahla esuka kwikhadi lakho. Zama ukukhetha indlela eyahlukileyo yokuhlawula kwiodolo yakho.
Ewe siqinisekisa ukhuseleko kubaxhasi bethu. Intlawulo yenziwa kwiphepha elahlukileyo elikhuselekileyo, kwaye idatha yekhadi emva kokuba intlawulo ingagcinwanga kwinkqubo. Sisebenzisana neNadezhda kunye nenkqubo yokuhlawula ye-CloudPayments eyaziwayo.
Namhlanje akunakwenzeka. Kwixesha elizayo elingekude, intlawulo yokuhanjiswa kweentyatyambo ngemali iya kufumaneka kubathengi bethu, emva kokugcwalisa ulwazi olufunekayo kwi-odolo, uya kunikwa ngeendlela zokuhlawula ozikhethile.
Kwimeko yokurhoxiswa komyalelo, isixa esihlawulweyo siya kubuyiselwa sigcwele kwiakhawunti yakho yebhanki kwiintsuku zomsebenzi ezisi-7.
Intlawulo yeodolo ngekhadi lebhanki ikhawuleza. Sisebenza nenkqubo ye-CloudPayments, eyindlela eqinisekisiweyo yokuhlawula. Emva kokwenza intlawulo, uyakufumana umyalezo wokuba umsebenzi uphumelele. Ungakuqinisekisa oku kwiakhawunti yakho yobuqu.
Ungayihlawulela iodolo yakho ngqo kwiwebhusayithi ngekhadi lebhanki okanye emva kokufumana ikheshi. Amaziko asemthethweni angasebenzisa le nkonzo yokuhlawula ngaphandle kwemali.
Ecaleni kwesipha ngasinye lixesha eliza kuchitha kuyilo nasekuhambiseni iintyatyambo. Indawo inecebo lokucoca ulwelo olulula "ukuhanjiswa okukhawulezayo", xa uyisebenzisa, uya kubona ukhetho lwee-bouquets ezinokuhanjiswa ngexesha elifutshane.
Ukuhanjiswa kwesi sixeko kukhululekile, kwikomkhulu naseSt. Petersburg - ngaphakathi kwendlela eringayo. Ukuba idilesi yokuhambisa ingaphandle kwesixeko, iindleko zayo zibalwa ngokuzenzekelayo. Inkqubo, esekwe kumgama ngeekhilomitha, iya kukunika ixabiso lokuhanjiswa. Ngokwesiqhelo kuqikelelwa kwiiruble ezingama-45 nge-1 km.
Ukuba awukwazi ukubonisa idilesi yokuhambisa ngqo, kwaye umamkeli uya kuba ngaphandle kwesixeko ngokukhawuleza xa ethumela isipha, umqeshwa ngokuqinisekileyo uya kukubiza ukuba usombulule lo mbandela.
Kwiwebhusayithi, unokuchaza ixesha lokuhanjiswa ngeyure. Ngelishwa, inkonzo yethu ayihambisi ngexesha elifanelekileyo. Kodwa sizama ukufumana indlela yomntu ngamnye kumthengi ngamnye, ukuze ubonise iminqweno yakho ngalo myalelo, kwaye abasebenzi bethu baya kuzama ukwenza konke okusemandleni ukuphumeza.
Ewe kunjalo, shiya nje inombolo yefowuni yomamkeli. Ikhuriya iya kumbiza kwaye ichaze ixesha kunye nendawo yokuhambisa iodolo yakho.
Emva kokubeka iodolo, uyakufumana umyalezo onekhonkco elikhethekileyo ukujonga imeko yeodolo yakho. Ngokucofa kuyo, unokunxibelelana nabatyali beentyatyambo, jonga iifoto ze-bouquet egqityiweyo kwaye ulandele indawo yeodolo yakho kwimephu. Ekupheleni kokusiwa, ungabhala uphononongo kwintyatyambo obusebenzisana nayo. Siyavuya xa abathengi benika ingxelo, ukuze usithumelele umyalezo wempendulo kunye nokuvela kwakho ngokubanzi ngoku-odola ukuhanjiswa kweentyatyambo.
Ewe, ngoncedo lwenkonzo yethu unokuhambisa iintyatyambo kungekuphela kulo lonke ilizwe, kodwa kwihlabathi liphela. Chwetheza nje isixeko onomdla wophendlo kuso kwaye uya kuboniswa zonke iindlela ezikhoyo zeentyatyambo.
Kufutshane ne-bouquet nganye kukho ixesha, eliyimfuneko ekubhaliseni nasekuhambiseni isipha kwisongezo. Xa ufaka iodolo, qiniseka ukuba ujolise kuyo. Ukuba ufuna ukuhambisa iintyatyambo ngokungxamisekileyo, emva koko sebenzisa isihluzi sokuhambisa ngokukhawuleza. Ukuba ufuna ukuhanjiswa ngomhla othile, emva koko ukhethe xa ubeka iodolo. Ukuba ubeka uphawu lokukorekisha ecaleni kwegama "khumbuza" kwiakhawunti yakho yobuqu, inkonzo yeFloristum.ru iya kukukhumbuza iodolo yakho. Ileta iya kuza kuwe kwiintsuku ezintathu ngaphambi komhla wokuhanjiswa ocwangcisiweyo.
Chaza nje indawo yokuhambisa, khetha i-bouquet oyithandayo kwaye ubeke iodolo yakho. Ku-odolo, bonisa iinkcukacha zonxibelelwano zomthumeli kunye nomamkeli, kunye nexesha lokuhambisa. Emva kokuhlawula ngempumelelo i-odolo, abagcini bethu bezimbali baya kuyisa emsebenzini. Uya kwaziswa ngokuhanjiswa ngomyalezo.
Ukuba awuzithandi iintyatyambo ozifumene ngasiphi na isizathu, yiya kwiakhawunti yakho okanye ulandele ikhonkco elithunyelwe kuwe kumyalezo okanye ngeposi. Apho ungashiya ingxelo malunga neodolo yakho. Ukuba uphononongo alunanto, unokuvula imbambano, isixa semali kwiakhawunti yeentyatyambo siya kuba ngumkhenkce ngexesha lokuqhubeka kwenkqubo. Ngokomgaqo-nkqubo wenkonzo yethu, umthengi angavumelana nesazi seentyatyambo ukuba sithathe indawo yesipha okanye sibuyise isixa esipheleleyo. Iiflorists nazo zinelungelo lokubonelela ngesaphulelo kule miyalelo ilandelayo. Ingxabano inokuvulwa zingaphelanga iintsuku ezintathu emva kokuthunyelwa kwesipha. Ukuba ngaphambili ubhale uphononongo olulungileyo lweodolo kwivenkile okanye umntu othile weentyatyambo, imbambano ayizukuvula.
Ungacofa kwiqhosha "Andikwazi ukufikelela evenkileni". Kule meko, umntu othengisa iintyatyambo uya kufumana isaziso sokuba uzame ukufowuna, kwaye amanqaku evenkile aya kuncitshiswa ngokuzenzekelayo. Kwelinye icala, siya kuqhagamshelana nevenkile, kwaye abasebenzi bayo baya kukubiza kwakhona.
Ngokwesiqhelo abamkeli banxibelelana ngaphambi kokuziswa kweyona nto. Ikhuriya liya kuvuma ngexesha elifanelekileyo lokuhambisa iintyatyambo ezintsha kwidilesi. Ukuba ubeke iodolo yomhla othile, umamkeli uya kuqhagamshelwa ngomhla wokuhanjiswa, ngesiqhelo kusasa. Kwiakhawunti yakho yobuqu, unokufumana ixesha lokuhambisa iodolo yakho, iya kutshintshwa ibe lixesha elifanelekileyo kumamkeli.
Kwisipha ngasinye, ixesha elincinci lokubhaliswa kunye nokuhanjiswa kugqityiwe, kubonisiwe ecaleni kwesipha ngasinye. Unethuba lokubeka iodolo kwangaphambili nangomhla wokuhanjiswa.
Inkonzo yethu isebenzisana ngokubonakalayo namaqumrhu asemthethweni kwaye ihlala iqhuba ii-odolo zeshishini, kule nto sincedwa yinkqubo ezenzekelayo. Uluhlu olukhulu lweentyatyambo lukuvumela ukuba ukhethe i-bouquets kuwo nawuphi na umsitho. Xa ufaka iodolo, kuya kufuneka ubonise iinkcukacha zombutho osemthethweni. I-invoyisi iya kuthunyelwa ngokuzenzekelayo kwi-imeyile yakho.
Xa ubeka i-odolo yokuqala kwinkonzo yethu njengeziko elisemthethweni, uya kuthunyelwa ngokuzenzekelayo ileta enesivumelwano kunye ne-invoyisi. Kuya kufuneka ugcwalise, utyikitye kwaye uthumele isivumelwano osifumene kwiikopi ezimbini kwi-imeyile yethu. Emva koko siya kuthumela omnye wabo abuyele kuwe.
Ukuba unomdla wokubona ikhontrakthi ngaphambi kokufaka iodolo, emva koko unxibelelane nathi: @
Umthengi ubhalisa kule ndawo ngokuzenzekelayo emva kokufaka iodolo yakhe yokuqala. Inombolo yefowuni oyichazileyo kulwazi lwe-odolo iya kuba kukungena kwakho kwixa elizayo. Ikhowudi yokufaka iakhawunti yakho iya kuthunyelwa kuwe ngomyalezo.
Ukuba uodola intyatyambo ngesiqwenga ngasinye, kufuneka ukhethe ubuncinci iziqwenga ezi-7. Sikucebisa ukuba uye kwicandelo le "Super Offer", linokufumaneka kwiphepha eliphambili lesiza. Nazi izibonelelo ezivela kwiivenkile ezinkulu kunye neevenkile ezinamaxabiso amahle.
Ewe Unga. Ukuba ufuna ukutshintsha into kwi-bouquet ekhethiweyo, vele ushiye iminqweno yakho kulwazi olongezelelweyo ngexesha loku-odola. Abathengisi bethu baya kukubiza ukuba uxoxe ngeendlela ezinokuthi zitshintshwe.
Kufutshane nomfanekiso kunye nesipha kukho uhlalutyo olupheleleyo lolwakhiwo lwayo. Unokucofa nakweliphi na igama lentyatyambo, iya kuphakanyiswa ngombala emfanekisweni.
Ubungakanani besipha buboniswa ecaleni kwefoto nganye. Ziboniswa ngumthengisi weentyatyambo ongumbhali wolungiselelo lweentyatyambo.
Nazi izibonelelo ezivela kwiivenkile ezinkulu kunye neevenkile ezithengisayo ezinamaxabiso afanelekileyo ezimbali. Ukongeza, unokuthatha isigqibo malunga nenani leentyatyambo, uhlobo, ubude besiqu kunye nombala.
Ukufumana ii-bouquets ngeentyatyambo ozifunayo, jonga kuncedo lwezihluzi.
Ewe kunjalo. Iiflorists zithumela iifoto ze-bouquets esele ziqokelele ngaphambili, ke kuya kuba lula kubo ukuvelisa ukwakhiwa okufanayo.
Ewe, ngokuya kwiphepha lemveliso, ungonyusa isipha nge-30% okanye i-60% Oko kukuthi, ixabiso lesipha liya kuba phezulu ngale nxalenye yemali yoqobo, kwaye iintyatyambo ezifakwe kwisipha ziya kongezwa kulwakhiwo. Ukuba ukhetha isipha sodidi olunye lweentyatyambo, ungalinyusa inani lawo ngalo naliphi na inani.
Zonke iinketho ze-bouquets zichazwe kwindawo leyo. Sicebisa ukuba usebenzise amacebo okucoca ulwelo xa ukhangela. Kodwa ikakhulu sisebenza kunye neentyatyambo ezisebenza ngeentyatyambo ezisikiweyo.
Bonisa iminqweno yakho kunye neemeko zokuzalisekiswa komyalelo kulwazi olongezelelweyo. Ukuba ikhona, intyatyambo iya kukubizela ingxoxo.
Iiflorist zisebenzisana nenkonzo yaseFloristum.ru ziyawazi umthetho wethu: “Ziintyatyambo ezintsha nje! Andivumi? IFloristum.ru ayisiyakho. " Ke ngoko unokuqiniseka ukuba kuphela kuqokelelwe iintyatyambo ezintsha. Xa kuziswa isipha, umamkeli uvavanya ukutsha kweentyatyambo. Emva kwayo yonke into, kwintyatyambo nganye onomdla kuyo, unokufumana uphononongo kwiwebhusayithi yethu.
Ewe, intlawulo yenziwa kwiphepha elahlukileyo, kwaye idatha yabathengi ayigcinwa. Sisebenza kuphela neenkqubo ezaziwayo nezithembekileyo.
Ewe kunjalo. Xa ufaka iodolo, ubeka imali kuqala kwiakhawunti yenkonzo yethu, apho zigcinwa de kugqitywe iodolo kunye nolunye usuku lweentsuku ezintathu. Amanyathelo anjalo athatyathwa ukwenzela ukuba umthengi abe nemibuzo malunga nomyalelo. Ngeli xesha, unethuba lokuvula impikiswano, emva koko imali ayizukufakwa kwiakhawunti yeentyatyambo kude kube zonke iingxaki zisonjululwe.
Ukuba i-odolo sele ithathiwe ngenxa yomsebenzi, kuya kufuneka ulinde ukusuka kwi-1 ukuya kwi-14 yeentsuku zokusebenza.
Ukuba usadanile ngeodolo yakho, qiniseka ukuba ubhala uphononongo. Ukuba ayilunganga, ungavula impikiswano kunye neentyatyambo. Ngexesha lokucaciswa kwazo zonke iimeko, imali ekwiakhawunti yeentyatyambo iya kuvalwa. Ungavuma nentyatyambo ukubuyisela isipha okanye ukubuyisa isixa esipheleleyo semali. Abathengisi bethu baxabisa abathengi babo, ke bahlala bebanikeza izaphulelo kwiiodolo ezilandelayo. Ingxabano ingaqalwa zingaphelanga iintsuku ezintathu ukusukela kumhla wokuhanjiswa kwe-bouquet. Ukuba ngaphambili ushiye uphononongo olulungileyo kwi-odolo, ukuvula impikiswano akunakwenzeka.
Emva kokuba iintyatyambo zisiwe, umyalezo uza kuthunyelwa kwinombolo yakho yefowuni, ekuphenduleni apho ungabhala khona umbono wakho wokusebenza kunye neentyatyambo kunye nomyalelo ngokwawo. Kwisiza, ngokufaka iakhawunti yakho, ungabhala uphononongo.
Ivenkile nganye ineengxelo ezininzi, phakathi kwazo kukho iimpendulo ezilungileyo nezingalunganga. Ecaleni komnye nomnye wabo kubonisiwe ukuba ngubani obhale uphononongo: umthengi okanye umamkeli. Uphengululo lunokuhlelwa kuphela ngumntu obelubhale ngaphambili.
Sinika iposikhadi yasimahla kwisipha ngasinye. Ngumthengi kuphela ekufuneka abhale umbhalo wokubulela. Umthengisi weentyatyambo uya kukhetha ikhadi elilingana nesipha sakho kunye nesicatshulwa.
Xa ufaka iodolo, uya kunikwa inani leemveliso ezongezelelweyo. Ukuba awuyifumani into oyifunayo apha, nxibelelana nabasebenzi, ngokuqinisekileyo baya kukunceda.
Isityali seentyatyambo sikhetha ikhadi lokubulisa ngokusekwe kwisicatshulwa osibhalileyo. Kodwa ukuba uneminqweno ethile, masixelele malunga nabo kulwazi olongezelelweyo xa ufaka iodolo.
Xa ufaka iodolo, beka uphawu phambi kwamazwi athi "Thatha ifoto ngesipha". Ukuba umntu obhalayo uyavuma, uya kuwufumana umfanekiso kwiakhawunti yakho okanye nge-imeyile.
Isicelo seselfowuni "Ientyatyambo zeFloristum.ru" sinokukhutshelwa kungekudala kwiAppStore okanye kwiPlayMarket.
Inkonzo yethu iqeshe iintyatyambo ezivela kwizixeko ezahlukeneyo. Xa ubeka iodolo, intyatyambo isebenza naye, opapashe umnikelo kwisixeko osithandayo. Isixeko ngasinye sineentyatyambo ezahlukeneyo, ke uluhlu lweentlobo ezahlukeneyo luyahluka.
Zininzi ii-florists kwizixeko ezikhulu, ke oko kutsala abathengi kungekuphela nje uluhlu olubanzi, kodwa ngamaxabiso asezantsi.